दाहासंस्कार गर्न ठिक गरिएका रामकिशोर जुरुक्क उठेर भने, मलाई गल्तीले लगेको थियो, फेरी फिर्ता पठाइदियो – MeroOnline Khabar
काठमाडौँ, १० वैशाख । मानिसको मृत्यु भइसकेपछि पानि बाँचेका घट्नाहरु यदाकदा हामी सुन्छौं । यस्तो पुनर्जीवन विरलैले मात्रै पाउँछन् । भारतको नयाँदिल्लीस्थित अलीगढको अतरौली किरथल गाउँमा एक व्यक्तिले यस्तै पुनर्जीवन पाएका छन् । रामकिशोर नाम गरेका ती व्यक्तिको केही दिन अघि मृत्यु भएको थियो । उनको अवस्था राम्रो थियो तर अचानक उनको मृत्यु भयो । यो घट्नाले परिवारमा नराम्ररी पीडा पर्यो । रामकिशोरको मृत्यु भएपछि उनको आफन्तलाई खबर गरियो र उनको घरमा मानिसहरुको भीड लाग्न थाल्यो ।
रामकिशोरको मृत्यु भएपछि उनको अन्तिम दाहासंस्कारको प्रक्रिया शुरु गरियो । तर त्यहाँ उपस्थित मानिसहरु एकाएक अचम्मित भए । किनभने दाहासंस्कार गर्न ठिक गरिएका रामकिशोर जुरुक्क उठेर बसे । उनी एकदम ठिकठाक थिए । उठेर उनले भने, ‘मलाई गल्तीले लगेको थियो, अब फिर्ता पठाइदियो ।’
रामकिशोर सिंह बोलेको देखेपछि त्यहाँको माहौल नै बदलियो । पहिला रोइरहेकाहरु सबै खुसी देखिन्थे । उनको घरआसपासका मानिसहरु पनि यो थाहापाएर सबै त्यहीँ आए । तर कसैलाई यो घटनामा विश्वसै लागेको थिएन । केही दिन यता यो घटना निक्कै चर्चाको विषय बनेको छ ।
रामकिशोर भन्छन्, ‘अचानक आँखामा अँधेरो भयो र वेहोस भएँ । आँखा बन्द हुनेसाथै मैले लामोलामो दारीवाला केही मानिसहरु देखेँ । त्यसमध्ये एक मुख्य माहात्मा पनि बसेका थिए । दारीवाला मानिसहरु मुख्य महात्मासँग कुराकानी गरिरहेका थिए । ती दारीवाला मुख्य महात्माले जनै लगाएका थिए भने उनी झुलमा बसिरहेका थिए ।’
उनी भन्छन्, ‘यसै क्रममा झुलमा बस्ने मुख्य महात्माले सोधे की यो को हो ? यसलाई किन ल्याएको ? एउटा आवाज आयो, यसको अहिले पालो होइन । यसलाई भगाई देउ । र मलाई यस्तो लाग्यो माथिबाट कसैले धकेलिदियो । र म रुँदै फर्किएँ ।’ रामकिशोरले भने, ‘यो घटनापछि तीन दिनसम्म उठ्न सकिन । शरीर पहेँलो भयो ।’ उनी भन्छन्, ‘जब आँखा खुल्यो, मानिसहरुलाई रुँदै गरेको देखेँ । बीबीसी
← आफ्नो ज्यान दिएर पूरै परिवारको ज्यान बचाउने बफादार कुकुर
पत्नीलाइ सधै शंका लाग्ने पतिका यी ५ कुरा जानी राखौ →
उत्तर कोरियाका शासक किमबारे चकित बनाउने १० रोचक तथ्य